Erayada Afsoomaliga ah ee loo isticmaalo si ka duwan macnahooda :- | Toggaherer's Blog
« GOLAHA WAKIILADA SOMALILAND OO NOQDAY GOLE MA DHALAYS AH.
A LETTER TO PRESIDENT JACOB ZUMA OF SOUTH AFRICA »
Erayada dhinaca Siyaasada:-
Sidii aan horeba idiinku soo gudbiyey, intii ay jirtay luqada Afsoomaligu waxaa markasta soo baxayey erayo cusub oo ku soo biirayey Afsomaliga,waxaan ula jeedaa hadal ahaan iyo macnaha loo isticmaalayo,balse erayada qaarkood way jiri jireen AfSoomaali ahaan.
Fadhi ku dirir:- Dhinaca Siyaasada erayada ku cusub ayaa waxaa ka mid ah erayga “fadhi ku dirir” oo macno ahaan noqonaya “fadhi- ku dagaalan”,balse loola jeedo muranka Siyaasadeed ee had iyo jeer ka jira goobaha ay Soomalidu isgu timaado amase ay ku kulanto.
Wanjal:- Sida la ii sheegay eraygani waa eray laga soo bartay dalka Itoobiya,mana garanayo luqadaha Itoobiya laga hadlo tan uu ka soo jeedo.Eraygu macno ahaan wuxuu noqonayaa “marka shaqsi la la waxyeeleynayo”,haddii ay tahay Siyaasad,dhaqaale iyo nolol ahaanba,waa khaarajis,waa khiyaamayn,waa dhac iyo weliba dil.
Waa eray hal-hays ah xilligan ( hebel aynu wanjalo).
Dowlad sal ballaaran(Dowlad loo dhan yahay,Dowlad layska wada dhex arko, Dowlad wada jir ah,Dowlad midnimo Qaran,Dowlad Federaal ah) :- Erayadani waa isku macne,waxaana loola jeedaa Dowlad dhamaanba ay ku jiraan Qabiilooyinka Soomaliya degan oo dhami,waana qayb ka mid ah muranka ilaa maanta Soomaliya ka taagan. Dhamaan erayadana waxaa ka dhexmuuqda in Qabyaalad loo jeedo.
Dowlad Federaalka ah:- Waxaa looga jeedaa midowga laba Dowladood amase marka laba maamul ay midoobaan,waxay noqon karaan Dowlado shacabkoodu ku kala duwanaan karaan dhaqaalaha , siyaasada , dhaqanka ,diinta , IWM,laakiin waxaa wax lala yaabo ah in la yidhaahdo waxaa midoobaya amase Federaal noqonaya Muqdisho iyo Kismaanyo amase Marka iyo Jowhar amase Garoowe iyo Beledweyne.
Haddii la doonayo midowga Soomaliya amase federaalka Soomaliya wuxuu ka iman karaa oo keliya Shantii Soomaaliyeed,wixii intaa ka sokeeyaana waa uun hadal layska yidhi.
Dowlad ku meel gaadh ah:- Waxaa loola jeedaa Dowlad loogu tala galay in ay mudo kooban jirto,sida aad magacaba ka garan karto waa Dowlad lagu meel gaadhayo,magacanina wuxuu soo caan baxay intii ka dambaysay 1991,wixii xilligaa ka dambeeyeyna waa eray cid waliba baratay kuna sheekaysato.
Dowlad Goboleed:- Waxaan filayaa in loola jeedo Dowlad ku kooban oo keliya Xukunka Gobolo kooban.
Dowlad dib u heshiisiin:- Waa dowlad shaqadeedu tahay oo keliya in ay cid heshiisiiso.Runtii waa wax aad u adag in ay Dowlada shaqadeedu noqoto oo keliya mid cid uu heshiisiinaysa.
Erayada aqooneed ee si khaldan loo isticmaalo:-
Prof, Dr, Eng erayadani waa erayo aqooneed,waa derajo aqooneed,waa derajo uu qofku ka gaadho aqoonta uu bartay,laakiin maanta waxaa loo isticmaala qofkasta oo waxna qori kara waxna akhriyi kara,marmarka qaarkoodna waxaad la yaabaysaa marka aad aragto qof aad si fiican u taqaan oo aad ogtahay in aanu gaadhin derajaa oo loogu yeedhayo Prof amase Dr.
Inta badan waxaa sabab u noqon kara in si khaldan loo isticmaalo erayadan,waxaa maqaalooyinka ka tegay dadkii aqoonta lahaa, deegaanka ahaa oo waxaa soo buuxdhaafiyey magaalooyinka dad ka yimid MIYIGA amase reer guuraa ah,taas oo keentay in ay erayadan sidii la doono loo isticmaalo.
Magacyada Ururada cusub:- Sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayey magacyo Ururo siyaasadeed oo cusub kuwaas oo aan hore looga aqoon amase looga maqli jirin dhulka Soomaalida, waxaana ugu muhiimsan ururada ay ka mid yihiin Maxkamado,Ashabaab , Argagixiso iwm.
Erayada dhinaca saxaafada ,waxaa ugu muhiimsan erayada ay ka mid yihiin Internett, Email iyo Webside oo dhamaantood mar uu la soo baxay isgaadhsiinta casriga ah.
Hadal iyo dhamaan waxaa intaa ku soo koobayaa maqaaladii taxana ahaa ee aan kaga hadlayey erayada aan is leeyahay waxay ku soo biireen Afsoomaliga ,isticmaal ahaan mudooyinkii dambe,cidii halkaa ka sii wadaysana waa u furan tahay.